IOS Emulator tsara indrindra ho an'ny PC (2020) - Sintomy amin'ny Windows 10 - Softwares
Mitady emulator an'ny iOS amin'ny birao? Azonao atao ny mampiato ny haza làlanay eto satria miverina any aoriana izahay. Amin'ity lahatsoratra ity dia nitanisa ireo emulator iOS 10 ambony izahay izay azo ampiasaina mora foana amin'ny birao. Na dia nampiasa ny tsirairay avy aza izahay ary mieritreritra, ity lisitra ity dia afaka manampy be dia be, misokatra foana izahay amin'izay soso-kevitra mety hanananao.
Raha mpampiasa iPad na iPhone ianao dia mety ho sarotra aminao ny mizara rakitra na mampandeha ny fampiharana iOS amin'ny Windows PC. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo emulator an'ny iOS ambony indrindra, izay ahafahanao mihazakazaka ny fampiharana iOS amin'ny solosaina Windows. Ireo emulateur iOS dia mamorona ekosistia iOS ao amin'ny solosaina Windows, ka manamora ny fampiasana ny fampiharana iOS amin'ny Windows PC-nao.
Lisitry ny emulator iOS tsara indrindra ho an'ny Windows 10:
Andao hojerentsika ireo izay notsapainay ary hitantsika fa mendrika hanandramana-
Sidina fitsapana Xamarin
Iray amin'ireo emulateur iOS tsara indrindra, SmartFace, dia mora sy mora ampiasaina. Safidy malaza eo amin'ireo mpampiasa izany raha ny momba ny emulator an'ny iOS. Ity emulator ity dia manana kinova roa - ny iray dia ny kinova maimaim-poana, ary ny iray kosa ny voalohany. Ary koa, manolotra fiasa tsy manam-paharoa sy azo antoka ho an'ireo mpampiasa izy.
Raha te handefa ilay kinova premium ianao dia mila mandoa $ 99. Aza misalasala misafidy ny drafitra arakaraka ny takinao sy ny teti-bolanao. Manoro hevitra anao izahay hampidina ilay kinova maimaim-poana aloha ary andramo izany. Avy eo azonao atao ny manatsara ny kinova aloa raha tianao izany.
Ity dia emulator iOS malaza ho an'ny Windows PC indray. Ity emulator ity dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa apps Apple amin'ny Windows PC. Ary koa, ity emulator ity dia manana fivarotana fampiharana azy manokana.
Ao anatin'ny fivarotana fampiharana dia afaka mizaha rindrambaiko ankolafy maro maro ny mpampiasa.
Ity dia daty ny safidy tsara indrindra amin'ny emulator App.io. Izy io dia miaraka amin'ny interface tsotra sy mora ampiasaina. Ary koa, manolotra ny endri-javatra fitehirizana Cloud. Ny fampiasana 90 minitra voalohany dia maimaim-poana.
Avy eo raha te hampiasa bebe kokoa ny emulator ianao dia tsy maintsy mividy ilay kinova premium.
4. sidina fitsapana Xamarin
Ity no emulator ofisialy an'ny iOS an'ny Apple. Tonga mialoha entana miaraka amin'ny endri-javatra lehibe. Ireo fiasa rehetra ireo dia manaporofo fa manampy be amin'ny fanandramana ary koa ny fampiharana ny iOS amin'ny solosaina Windows. Ny emulator dia manolotra fanohanan'ny mpampiasa marobe.
Mila fotoana kely vao ho zatra amin'ity emulator ity.
Ity dia emulator iOS miorina amin'ny browser Chrome. Manampy amin'ny santionany mahomby amin'ny karazana rindrambaiko iOS izany. Izy io dia miaraka amin'ny endri-javatra manokana izay tsy ho mora amin'ny emulator iOS hafa ianao. Tena manampy amin'ny fampiroboroboana sy ny fitsapana ny fampiharana iOS amin'ny Windows PC anao.
Izy io dia miaraka amin'ny interface interface tsotra. Izy io dia miasa tsara amin'ny fakana tahaka ny fampiharana iOS amin'ny Windows PC.
Ny manaraka ao amin'ny lisitray dia Mobione StudiOS malaza iray hafa. Na dia tsy mahazo fanavaozam-baovao avy amin'ireo mpamorona aza ity emulator ity dia mandeha tanteraka izy io. Ankoatr'izay, ity iray ity dia manohana injeniera izay mety mila mamorona rindrambaiko miampita dingana ho an'ny finday.
Raha fantatrao ny rafitra Adobe Air, Air iPhone dia mety ho safidinao tsara indrindra. Ity emulator ity diamiankina ihany koaamin'ny rafitra mitovy amin'izany. Ny zavatra tsara amin'ity iray ity dia mora ampiasaina. Afaka maka sy mihazakazaka fampiharana iOS tsotra fotsiny ianao. Yeah! Dia izay.
Ity iray ity dia matetika ampiasain'ny manam-pahaizana amin'ny fampiharana iPhone sy iPad. Azonao atao ny mampiasa maimaimpoana ny kinova voalohany raha toa ka 40 $ ny vidiny feno. Raha mitady safidy mendrika ianao mandritra ny fihazakazanao ny emulator an'ny iOS ho an'ny PC, dia azonao atao ny manome vola an'io nefa tsy misy isalasalana. Taminay dia hitanay fa milamina tsara tokoa ny traikefan'ny mpampiasa.
Wave dia emulator iOS iray hafa izay voafantina tamin'ny mpankafy. Ity iray ity dia ampiasain'ny mpamorona mazàna amin'ny tanjona fitsapana. Raha ampitahaina amin'ny emulateur iOS hafa dia misy ity izay misongadina amin'ny fisongadinana. Mahaliana fa tsy mila misintona an'ity emulator ity ianao. Azonao atao ny mampiditra sy mampiditra azy fotsiny.
Ny Testflight dia ampiasain'ny mpamorona ho an'ny fanandramana beta fampiharana iOS izay misy kaody mampiasa Xamarin. Ny mahaliana dia izy no malaza indrindra teo amin'ireo mpamorona iOS noho ny antony maro ao anatin'izany ny fisiany maimaimpoana, fampisehoana malefaka ary mora ampiasaina.
Ny manaraka eo amin'ny lisitray dia emulator tsara ho an'ny mpilalao. Izy io dia tohanan'ny tsikera tsara amin'ny fihazakazahana lalao iOS isan-karazany soa aman-tsara. Tsy heverina ho ny tsara indrindra fa mety mbola te hanandrana ianao.
Notehirizinay farany ity ao amin'ny lisitray. Noho ny antony tsotra tsy hitantsika fa mora ny manangana sy mampiasa azy. Raha vao manomboka ianao dia manoro hevitra anao izahay mba tsy hiala amin'io iray io. Na izany aza, raha pro ianao tamin'ny fampiasana emulator dia mety tsy ho sarotra aminao ihany koa izany.
Na dia mety mahasoa emulator aza izy io, dia mety hanelingelina fampiharana hafa amin'ny rafitrao. Izany dia satria mihinana ny fampiasana RAM lehibe. Manaraka izany ny korontana amin'ny filalaovana lalao avo lenta. Noho izany, mamporisika anao izahay hampiasa Advanced System Optimizer, izay miasa ho toy ny lalao booster ary manaparitaka ny fahombiazan'ny rafitra. Ho fanampin'izay, miasa ho toy ny fiarovana ny rafitra sy ny disk optimizer izy io.
Manantena izahay fa ity lisitry ny emulator an'ny iOS ity dia manampy anao hilalao lalao sy hampandeha ny rindranasa iOS amin'ny birao. Na dia maimaim-poana aza ny ankamaroan'ireny emulateur ireny dia misy ny tonga amin'ny sarany nefa mendrika hanandrana. Mizarà ny zavatra niainanao ary ampahafantaro anay ihany koa ny momba ny emulator tsara fantatrao izay mety ilaina amin'ny hafa. Tianay ny manavao ity lahatsoratra ity araka ny soso-kevitrao.
Sintomy ny iTunes amin'ny Windows 10
PUBG Mobile vs Call of Duty Mobile - Fampitahana amin'ny antsipiriany
antsamotady vs netflix vs hulu
Windows 10 lisitra lalao hazo fijaliana
mijery taranja putlockers maimaim-poana amin'ny Internet
Amazon no manana mpianatra fihenam-bidy
sarimihetsika manarona an-tserasera maimaimpoana